Fiteny eo an-toerana eo ho eo 2000 eo no ampiasaina eto Afrika. Senegal, Nigeria sy Kenya dia mampiasa vola fampiroboroboana sy fampitomboana ny fiteny vernacular. Ny mety ho fiparitahan'ny fampahalalana momba ny vaovao dia mbola tsy voasakan'ny vondrom-pikarohana siantifika any Afrika amin'izao fotoana izao. Mihevitra izahay fa betsaka kokoa ny olona mety hizara fahalalana raha toa ka afaka manao izany amin'ny fitenin-dreniny izy ireo.
Famintinana amin'ny teny anglisy sy frantsay
Azafady azafady omena famintinana fohifohy amin'ny teny frantsay / anglisy miaraka amin'ny fanamboarana ny elanelan'ny fiteny eo anelanelan'ny francophone sy ny anglophone Africa.
Azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiasana izany ny fandikan-teny Dikanteny Google or deepl - amin'izany raharaha azafady ampio naoty, toy ny hoe "Adikao mandeha miaraka amin'i [Google Translate / DeepL]".
Fiteny eo an-toerana
Ny AfricaArxiv dia azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny tetikasa amin'ny fiteny iray eo an-toerana (miaraka amin'ny fanehoan-kevitra voangona) mba handefasana ilay sora-tanana amin'ny tahiry manokana amin'ny teny anglisy.
Amporisihinay ny fandefasana ny fiteny izay ampiasain'ny vondron-tsiansa ao amin'ny firenena tsirairay avy, toy ny anglisy, frantsay, Swahili, Zulu, Afrikaans, Igbo, Akan, na fiteny afrikanina hafa. Ny sora-tanana natolotra amin'ny fiteny tsy anglisy dia hotanterahina ao amin'ny filaharana antonony raha vao mahazo manamarina azy ireo isika. Mampirisika anao izahay hanoro hevitra ireo olona afaka manampy amin'ny fanovana amin'ny fiteninao.
Fandikana ny sora-tanana
Alohan'ny hanombohanao mifandray amin'ireo mpanoratra ny lahatsoratra tany am-piandohana ho an'ny faneken'izy ireo mialoha sy nampiana.
Ny lohateny lehibe dia tokony ho ny lohateny nadika; manondro fa izany dia dikantenin'ny sora-tanana efa misy (oh: SW> EN] arahan'ny lohateny nadika ho amin'ny fandikana avy amin'ny Swahili mankany amin'ny teny anglisy). Ampio ny lohateny fiteny tany am-boalohany ho toy ny dikanteny mba hahitana ny dikanteny. Ny rohy mankamin'ny antontan-taratasy amin'ny fiteny tany am-boalohany miaraka amin'ny fanambarana mazava ny fandikan-teny dia tsy maintsy ampidirina amin'ny pejy voalohany.
Manampia metadata fanampiny sy mifandraika.
Fiteny afrikanina amin'ny tranokalanay
Hitanao fa azonao atao ny manova ny fitenin'ny tranokalanay ho Hausa, Swahili, Xhosa na Amaranth amin'ireo fiteny hafa voalaza ao amin'ny kaontinanta?
Ny tranokala AfricaArXiv dia adika otomatis GTranslate.io tamin'ny alàlan'ny plugin wp avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny fiteny 19. Tsara ny fandikana nefa tsy tonga lafatra no antony…: Mitady mpirotsaka an-tsitrapo izahay hanampy anay hanatsarana ireo lahatsoratra nadika ao amin'ny tranonkalantsika. Mba hidiranao amin'ny ezaka vondrom-piarahamonina ity azafady mailaka mailaka fandraisana anjara@africarxiv.org.
Amin'izao fotoana izao dia manolotra ny votoatinay amin'ny fiteny manaraka:
frantsay alemaina Hausa Hindi Igbo
Malagasy portogey Sesotho Somali Sunda
Alefaso izahay mailaka manampy amin'ny fandikana ireo fanambarana sy lisitra etsy sy eroa misy ifandraisany amin'ny fahasamihafana sy fampidirana ao amin'ny Fampianarana ambony, fikarohana ary fanontana akademika:
. Mieritrereta zahao
. Helsinki Initiative